Tuesday, 24 September, 2019 | २०७६ आश्विन ७ गते , मंगलवार
जातीय बिभेद समस्याको खोजि : एक विश्लेषण
२०७६ जेष्ठ २२ गते , बुधवार प्रकाशित
१. बिषय प्रबेशः
म धौलागरीमा दुई दशक दलित, महिलामा काम गरे। आज जातिभेद उन्मूलन दिवस तर नेपालमा सञ्चारमाध्यमहरुमा लेख खासै आएको देखियो । अहिले राजनीति, पद, पैसा र पहुंचमा दलित नेतादेखि सबै तल्लिन छन। गैर दलित आफ्नो सवाल मानव जातिको सवाल भनेर दलित जातिको सवाल लाई ठान्दैनन। सबै अलिक केही जानेका पद–दलित नेता भए । नजानेका तन्नम। यसैले पनि आज दलित आन्दोलन निकै ओझेलमा परेको छ।
२. दलितमा विभेदः
समयको परिवर्तनशील सोचमा आउने परिवर्तन, विकास लगायत कारणले परापूर्वकालको जस्तो विभेद र छुवाछुतमा समय सापेक्ष कमी अबश्य आएको छ। यद्यपि, राज्यले राजनीतिक पहलमा सचेततापूर्वक पहल गरेर भएको परिवर्तन होइन । हजारौ बर्षको समयको परिवर्तनको संभावनाले गर्दा विभेद केही घट्दै जाने क्रम चलिरहेको मात्र हो । केही गैरसरकारी प्रयास बाहेक अरुको केही यत्न भएन। यसरी नै अघि बढ्दा यो बिभेदको सांङ्ग्लो चुडिन अझै हजारौँ हजार वर्ष लाग्ने सुनिश्चित जस्तै छ ।
३. नेपाली दलितको पहुंचः
नेपालमा हिंसा र बलात्कार हुने महिलामध्ये करिब २० प्रतिशत दलित समुदाययका छन। यो जनसंख्याको अनुपातभन्दा धेरै बढी । यसको मुख्य कारण विभेदपूर्ण राज्य संरचना हो। विदेशी भुमिमा सस्तो श्रम गर्ने धेरै दलित यूवा रगत छ । यो जातीय अनुपातभन्दा धेरै देखिन्छ । नेपाली सरकारी जागिरमा करिब २ प्रतिशत दलित जातिका भए पनि तल्लो पदीय स्तरमा कार्यरत छन।
४.जात र थरको बिकासः
नेपालमा अहिलेसम्म धेरैलाई दलितको थर गोत्रको जानकारी छैन । यो नेपालमा एउटा राजनीतिक सवाल बनाउने कोशिस हुँदैछ । नेपालको सत्ताले लामो समयसम्म दलित, मुस्लिम र जनजाति समाजलाई आफ्नो थरबाट चिनिनै दिएन। हिन्दू उच्च जातिको वर्चश्वले थरमा प्रहार भयो। उच्च जातका भने थर लेखियो उत्पीडितको जात मात्र लेखियो। र लोकतान्त्रिक प्रगतिशील भनाउदा राजनीतिक दलले खाशगरी उनिहरुको नेतृत्व तहले पनि दमाई,कामी, सार्की, मुसलमान मगर गुरुङ आदि कथित लेखायो । प्रजातन्त्रिक कालमा यो सवाल थोरै उजागर भएपनि प्राथामिकता पाएन। क्रमशः लेख्न नदिइएका थरहरु लेख्ने क्रम दलितका टाठाबाठा — दलित जातिभित्रका घिमिरे, गौतम, दुलाललगायतले आफ्नो थर लेख्न थाले । त्यसले उच्च जातीय शासकलाई लौ यिनीहरुले त हाम्रो थर पो लेख्न भन्ने भ्रम भयो।
दलित जातमा थर थियो तर भन्न मात्र दिइएको थिएन। तथाकथित दलित बर्गलाई जातका आधारमा मात्र चिनिन बाध्य पारियो । उनीहरुले बिहेबारीमा भने थरको थोरै प्रयोग गर्थे । थर ठेगाना हो । जस्तो पोडवालबाट आएकालाई पौड्याल भनिएको हो । पौड्याल भन्ने ठाउँबाट बाहुन मात्र हिँडेका थियनन् । त्यहाँका बाटाघाटामा सबै जाति हिँडेका हुन । भनेपछि पौडेल बाहुन र दलित दुबै हुने भयो । जंगबहादुरले जङ्गबहादुर राणा लेख्न थाले । त्यस अघि उनीहरु राणा थिएनन् । मुस्लिम शासकले दिएको उपाधिलाई पृथ्वीनारायण शाहले लेखन अबलम्बन गरे। ऋषिका सन्तान भनिने गोतामेले गौतम भनेर लेखायो। नेपालका धेरै दलितले आफ्नो थर गोत्र नै राज्यले लेख्न नदिदा भुलिसके।
५. ऐतिहांसिक विश्लेषणः
हाम्रो राज्य व्यवस्था सामन्तवादको धङधङी गन्हाएको पूँजीवादी अर्धसामन्तबादी चरित्रको व्यवस्था हो यो । नेपालमा पहिलेका सामन्तहरु नै पूँजीपतिमा रुपान्तरित भएका हुन् । पुजिबादी क्रान्ति बिना अपनाएको पूजिबादले मजदुर र गरिब बर्गलाई रोजगार नदिने हुंदा बिदेशी श्रममा जोतिनु परेको हो। नेपाली सामन्तीहरु जमिन बेचेर पूँजीपति बने । ऊ हेर्दा पूँजीपति भए पनि सामन्तकै पूर्ण गुण देखिन्छ। उसलाई के लाग्छ भने, आफू सामन्त हुँदा नोकरका रुपमा रहेका दलित वा भूदास वा मोहीहरु अब पनि नोकरै हुन् र उनीहरु सधैँ सेवककै रुपमा रहनुपर्छ । यस्ता पूँजीपतिले उनीहरुको रुपान्तरण नै चाहँदैनन् ।
उनीहरुले सिंगो जातीय खलकलाई र बर्गीय रुपलाई मजदुरमा रुपान्तरण गरिदिन्छन । अर्थात रुप फेरिए पनि सार फेरिँदैन । यसैले अहिले पनि दलित, गरिब श्रमिकलाई उच्च धनी बर्गमा रुपान्तरण भएको बर्गले तल्लो उपेक्षित, उत्पीडित अवसर बिहीन समूहलाई हेर्न चाहँदैन । विभेद कयम राख्न चाहान्छ, यद्यपि उसलाई यस बारे पूर्ण थाहा पनि हुँदैन । पढेलेखेको सचते बर्गलाई समेत यस बारेमा बास्तबिक र ब्याबहारिक शिक्षित मानव बनाउनु अझै चुनौतिको तगारो बनिरहेकै छँदै छ।
लेखक सामाजिक अभियान्ता हुन् ।
सहाना प्रधानको राजनीति उतार–चढावयुक्त
विप्लवका भोजपुर सेक्रेटरी २ थान पेस्तोल र ग्रिनेडसहित पक्राउ
प्रलेसले कमरेड पुष्पलालका यी कुरामा ध्यान देला ?